Isbaanishka biyo la'aan ayaa ka jirta | Saadaasha Shabakadda
Sannadkan waxaan aragnaa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu daran ee isbeddelka cimilada: abaarta. Kaliya maahan kaliya in celceliska heerkulku uu sii kordhayo, wax khatar gelinaya keymaheenna, laakiin in uusan u di'in sidii la rabay. Kaydadkii biyaha ayaa gabaabsi ah, iyo haddii xaaladdu si dhakhso leh u hagaagi weydo waxaan la kulmi karnaa goyn xagga sahayda ah.
Abaarta na haysata, gaar ahaan waqooyiga gacanka, Waa tii ugu xumeyd ee soo marta dalka in ka badan 25 sano.
1 Waa sidee xaaladda kaydadku?
2 Cawaaqibta abaarta
Waa sidee xaaladda kaydadku?
Kaydadku way ka hooseeyaan 50%. Waqtigan xaadirka ah, waxaan ku noolahay waddan oomman. Basaska Duero, waxay ka yaryihiin 30%, markii sanadkii hore xilligan oo kale ay ahaayeen ku dhowaad 60%. Dooxada Guadalquivir waxay joogtaa 40%, Júcar-na waa 30% Segura-na waa 18%.
Badeecadaha Miño iyo Sil, markii ay si fiican u kaydsanaayeen, hadda waxay ku jiraan xaalad deg-deg ah: roobka ka da'a aaggaas ayaa hoos u dhacay inta u dhexeysa 25 iyo 30% celcelis ahaan 40-kii sano ee la soo dhaafay.
Roobabka hooseeya iyo kororka heerkulka, iyo sidoo kale kororka dadka (gaar ahaan dalxiiska) ayaa ah kuwa ugu weyn ee mas'uulka ka ah hoos u dhaca ku yimid biyahan ka imanaya baraagaha. Laakiin, si uun, tani waxay ahayd wax la saadaalin karo. Waxaan leenahay mid guga aad u kulul, xagaaga sidoo kale kulul oo qalalan kaas oo socday illaa ku dhowaad bilowgii Oktoobar meelo badan sida gobolka badda Mediterranean-ka.
Roobabku waxay umuuqdaan kuwo aan rabin inay yimaadaan, taas oo ayaa ku qasabtay 60 magaalo oo ku yaal Castilla y León inay dareeraha qaaliga ah siiyaan taangiyada waaweyn, iyo ku dhowaad 30 magaalooyinka Guadalajara iyo Cuenca. Intaa waxaa dheer, waxaa jira aagag ku yaal La Rioja, oo ka tirsan Sierra Sur de Sevilla, oo ku taal Axarquía ee Malaga, waqooyiga-galbeed ee León, xarunta Ourense iyo magaalooyin badan oo Extremadura ah oo laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan korontada. Laakiin kuwani kaliya maahan cawaaqibta.
Markuu si xad dhaaf ah u da’o roobabkuna ay buuxaan qoyaanka, dhirta korontada laga dhaliyo waxay furaan albaabbada si ay u soo saaraan tamar. Tani waxay keenaysaa in qiimayaashu ay hoos u dhacaan; halkii, Markay biyuhu yaraadaan, shirkaduhu waxay go’aamiyaan goorta ay soo saarayaan tamar, taas oo kor u qaadaysa biilka korantada.
Wixii beeraha iyo xoolaha abaaruhu waa dhibaato aad u daran. Biyo la’aan, dhirta midna ma kori karto, xayawaankuna ma sii jiri karaan.
Waxaa haray oo keliya in la sugo inta roob da’ayo. Malaha mustaqbalka abuurka daruuraha roobka ayaa xallin kara dhibaatada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Isbaanishka biyo la’aan ayaa ka jirta
Waddankeyga, Ecuador, iyo gaar ahaan Gobolkeyga Manabi, waxaan la kulmeynaa dib u habeyn xilliyada xilliyeedka, kuwaas oo saameyn weyn ku leh dhammaan muddada xilliyada iyo xoogga roobabku, maadaama ay aad u gaaban yihiin oo ay xoogaa yar yihiin. Habdhaqankani wuxuu saameynayaa gobolkeenna, gaar ahaan qaybta beeraha, sidoo kale xagga biyo siinta magaalooyinka.